Izixhobo ezi-6 zokubona isantya sePendrive ye-USB | Iindaba zeGajethi
Izixhobo ezi-5 zokwazi isantya sokuFunda nokubhala kwependrive ye-USB
Ukuba sisandula ukuthenga i-pendrive ye-USB kwaye sixelelwe ukuba yenye yezona zikhawulezayo kwaye zisebenza kakuhle kwimisebenzi yemihla ngemihla, mhlawumbi akufuneki sithembele kwi-100% kwinto umthengisi asixelela yona kunoko, yiya kwizixhobo ezimbalwa zokwazi. indlela echanekileyo, uthe ulwazi.
Ngale nto siza kuyenza Cebisa ukusetyenziswa kwezixhobo ezi-5 zamahala, eziza kukwazisa malunga nesantya sokudlulisa kwezi ziqhulo ze-USB, into enokuthi isetyenziselwe i-hard drive yangaphandle (eqhagamshelwe kwizibuko le-USB) kuba le yokugqibela inokuqwalaselwa njenge-USB flash drive enkulu.
1 Kutheni uvavanyo lwesantya kwi-USB stick?
2 Imbonakalo ye-USB ukwenza uvavanyo lwesantya
3 Isantya esiphumayo esinomfanekiso womzobo onomtsalane
4 I-USB Flash Benchmark ngolwazi olukhethekileyo lwe-USB pendrive
5 Jonga iFlash ngohlalutyo olunzulu lwamacandelo
6 ICrystalDiskMark yohlalutyo olwenzelwe wena kwi-USB flash drive
Kutheni uvavanyo lwesantya kwi-USB stick?
Kulo mbuzo, impendulo ngokuqinisekileyo iya kunikwa ngokukhawuleza ngabo bazinikezele kubo dlulisa isixa esikhulu solwazi kwikhompyuter yakho kwesi sixhobo sogcino lwangaphandle. Ukuba inejubane elicothayo, qiniseka ukuba i-10 GB yolwazi ingathatha iiyure ezimbalwa, oko kuyakuthetha ukuba ikhompyuter yakho ayifanelanga ukusetyenziswa ngelixa kusenziwa lo msebenzi. Kwelinye icala, abo bazinikeleyo kwimisebenzi yokuhlela yemultimedia (iaudiyo okanye ividiyo) baya kuhlala befuna i Isantya esikhulu kwizixhobo zakho zangaphandle, Ebandakanya ngokuthe ngqo ezi zinto ziqhuba nzima okanye i-USB flash drive.
Imbonakalo ye-USB ukwenza uvavanyo lwesantya
Indawo yethu yokuqala enegama «Uqwalaselo lwe-USB«, Ekunokujongana ngokulula nangokuthe ngqo okusetyenziswayo.
Into ekufuneka uyenzile kuku khetha idrive ekwi-pendrive yakho ye-USB (okanye kwi-hard drive yangaphandle) kwaye uqalise uvavanyo lwesantya. Iziphumo ziya kuboniswa kwangoko, onokuzirekhoda kuxwebhu oza kuluhlalutya kamva ukuba unqwenela njalo.
Isantya esiphumayo esinomfanekiso womzobo onomtsalane
Isixhobo esikhankanye apha ngasentla sinonxibelelwano oluncinci njengoko besitshilo, ngeli xesha «Ukukhawuleza»Inomtsalane ngakumbi. Ngaphandle koko, esi sixhobo kufuneka sisebenze kunye neemvume zomlawuli ukwenza uvavanyo lwesantya esisezantsi.
Ngokukhankanya "inqanaba eliphantsi" sibhekisa kubo Uhlalutyo olunzulu, eya kuthi isenze isixhobo sihlalutye ibhloko ngebhlokhi ukuzama ukufumana uhlobo oluthile lokusilela okanye ukukrexeza kumthamo wependrive ye-USB.
I-USB Flash Benchmark ngolwazi olukhethekileyo lwe-USB pendrive
Izixhobo esizikhankanyile ngasentla ziqhuba inkqubo yokudlulisa ulwazi kubungakanani obuthile befayile ekhutshelweyo njengenxalenye yovavanyo lwesantya. Isixhobo segama «I-USB Flash Benchmark»Inikezela enye indlela engcono ukusukela ngokufanayo yenza iimvavanyo ezininzi ngaxeshanye ngefayile yesayizi eyahlukileyo.
Iimvavanyo ziya kwenziwa ngeefayile ezibonakalayo eziza kukhutshelwa kwintonga ye-USB, ukusukela kwi-1kb ukuya kwi-16MB.
Jonga iFlash ngohlalutyo olunzulu lwamacandelo
Phantse iyafana ujongano olwaboniswa kwizicelo ezidala xa ifloppy diski ifomathiwe,Jonga iFlash»Inokufana nalo mfanekiso.
Umsebenzisi kufuneka achaze uhlobo lohlalutyo anqwenela ukulwenza kwi-USB flash drive yakhe; ungakhetha phakathi kwe Uhlalutyo olufutshane kuhlalutyo olupheleleyo; Njengoko unokuqonda, kuxhomekeke kuhlobo lohlalutyo olukhethiweyo, iya kuba lixesha apho yonke inkqubo ithatha, enokuthi ibe nde kakhulu ukuba sijonga i-pendrive enkulu yomthamo (okanye i-hard drive yangaphandle).
ICrystalDiskMark yohlalutyo olwenzelwe wena kwi-USB flash drive
Le yeyona ndlela yokugqibela esiza kuyikhankanya ngenxa yendlela yokwenza isenzo kwi-pendrive ye-USB. Emva kokukhetha iyunithi ehambelana nayo, umsebenzisi kuya kufuneka achaze ifayile ye- inani lamaxesha ofuna ukuba uhlalutyo lwenziwe Kananjalo, ubungakanani befayile enokuthi ikhutshelwe kwisixhobo.
Ngalo naluphi na olunye ukhetho uya kuba nakho ukwazi, ukuba i-USB flash drive ikumgangatho olungileyo, ukuba ineebhloko okanye amacandelo amabi kwaye ukuba iyanceda ukugcina iifayile zethutyana kwimisebenzi yokuhlela yemultimedia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Izixhobo ezi-5 zokwazi isantya sokuFunda nokubhala kwependrive ye-USB
uloyiso gonzalez sitsho
Molo, umbuzo, kwithuba elidlulileyo, ndathenga iipendrives ezi-2 tb (zesiTshayina), ndizama ukukopa imovie okanye nayiphi na ifayile, kodwa xa ndizama ukuyivelisa kwakhona ndiphosa umyalezo »ifayile eyonakeleyo» …… Ndicinga ukuba sele ndiyifumene Isisombululo kwezi pendrives,…. Xa ukopa ulwazi olusuka kwi-PC uye kwisithembiso, kuya kufuneka uyenze ungadluli kwi-3 mps ..... umbuzo wam ... ngaba ikhona inkqubo endivumayo ukuba ndilawule isantya sokukopa (Oko kukuthi, ndiyakwazi ikopi kwi-pendrive kwi-3 mps) ... Enkosi
Phendula u-victor gonzalez
enkosi ngezixhobo, ziluncedo olukhulu 😉
Ezi zezona ngxaki ziphambili zeWindows ngesisombululo esinokubakho
Fumana iilayibrari ze-dll ezifunekayo ukuqhuba usetyenziso kwiWindows